WE.LOCK - Famerenana ny Smart Lock hofan-trano sy fitarihana fivoriambe!
gerdview, hidy maranitra, tedee, we.lock, hanidy
Smart Locks dia miseho misimisy ao an-tranontsika. Hafa kosa ity iray ity. Mety kokoa ny hofan-trano. Ary satria tsy mbola nasehoko ny fanovana tato ho ato, anio dia ho 😀
SOHO Smart Lock - hidin-trano mahagaga noho ny fanofana
28 Febroary 2021
smart lock, hidy maranitra, SoHo, Smart Lock SOHO, tedee, WeLock
Rehefa nahita ny SOHO Smart Lock tamin'ny voalohany aho dia tsy nahazo fahatsapana tsara. Tsy naharesy lahatra ahy ny hidin-trano niaraka tamin'ny klavier niraikitra tamin'ny ilany. Ary na dia mbola tsy nametraka azy tao an-trano aza aho dia efa ...
Fanokafana mandeha ho azy - (r) fivoaran'ny trano hendry (Fikarohana
fanadihadiana, hidy maranitra, tsdee
Raha ny angom-baovao farany avy amin'ny Statista.com, amin'ny taona 2025 dia mihoatra ny iray amin'ny tokantrano dimy eto amin'izao tontolo izao no hampiasa vahaolana marani-tsaina. Ny haitao matanjaka dia mamonjy ny mpampiasa azy ireo hatramin'ny 30 minitra isan'andro, izay adika amin'ny ...
Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant, hevitra
Tedee Smart Door Lock - Famerenana horonantsary
google home, homekit, hidy maranitra, tsdee, hanidy
Fantatry ny rehetra sy tiany i Gerda! Androany isika dia mitsapa ny hidiny farany, marani-tsaina. Ny marimarina kokoa - Tedee Castle! Ahoana no fomba fiasa? Eny, holazainay;)
Tedee - famerenana ny hidin-tsaina vaovao avy amin'i Gerda
gerdview, hidy maranitra, tedee
Ohatrinona no niandrasako ity lapa ity, ohatrinona no nangatahako taminy! Mandra-pahatongan'ny nahatongavany ary afaka nametraka azy teo amin'ny toerako aho. Ny hidiko voalohany - Tedee. Na izany aza, tsy natao raha tsy ...
Locke maranitra Tedee miaraka amin'ny taratasy fanamarinana AV-TEST Smart Home Product Product
26 Novambra 2020
gerdview, smart lock, hidy maranitra, tedee
Ny hidy poloney an'ny tedee ampandehanan'ny marika Gerda dia nahazo ny mari-pankasitrahana "Approved Smart Home Product", nomen'ny AV-TEST. Ity fikambanana mahaleo tena sy laboratoara ity dia miresaka momba ny rindrambaiko fitsapana sy ny fitaovana IoT isan'andro. Ny tranoben'i Tedee dia ...
Xiaomi dia mampiseho hidy maranitra vaovao avy amin'ny HomeKit - Smart Lock Pro
8 Novambra 2020
hidy maranitra, hidy maranitra, xiaomi
Xiaomi dia manana hidim-baravarana vitsivitsy vitsivitsy any Chine amin'izao fotoana izao, izay mifanaraka amin'ny Apple HomeKit ny sasany. Anisan'izany ireo Aqara N100, N200 sy P100 ary Mi Smart Door Lock E. Vao nanambara ny orinasa ...
Rehefa mitombo ny isan'ny vaky trano dia mety ho famonjena ny fisafidianana hidin-trano tsara
Mazava ny angon-drakitra fa mitombo hatrany ny isan'ireo mpamaky trano any Polonina, ary 8 amin'ny 10 Pole no tsy manavaka hidin-trano amin'ny varingarina varavarana. Tamin'ny 2019, dia nisy 71 arivo. niditra an-tsokosoko tao an-tranon'olona, ​​izay ...
Apple HomeKit, Vaovao, Fandraisana Xiaomi
Xiaomi dia manolotra hidy marani-tsaina hafa miaraka amin'ny fanohanan'ny HomeKit
homekit, Miji, hidy maranitra, xiaomi
Fa ireo hidy marani-tsaina ireo dia nitombo tamin'ity taona ity. Fa tena tsara, satria noho io dia manana safidy betsaka isika. Ankehitriny misy famantaranandro vaovao avy any Mijia, Xiaomi sub-watch, nampiana ho an'ny vondrona. Navoaka 4 volana monja taorian'ny ...
Miverina avy amin'i Tedee i Gerda. Ity lakile maranitra ity dia mahaliana
gerdview, hidy maranitra, tsdee
Gerda Lock no hidy manan-tsaina voalohany ifandraisako. Na izany aza, efa be ny fotoana lasa teo hatramin'ny nanombohan'ity fifaninanana ity izay namoahan'ny fifaninanana nametaka ireo lakile manan-tsaina vaovao maro. I Gerda kosa dia mifoha ary ny mpamokatra poloney ...
Adala i Aqara - vavahady vaovao sy hidim-baravarana miaraka amin'ny fakantsary
Aqar, hubara aqara, hidy maranitra, xiaomi
Saingy nitifitra izy ireo! Androany dia misy vokatra vaovao avy any Aqara ho anao! Vavahady M1S vaovao sy fikandrana varavarana vaovao miaraka amina fakan-tsary miorina! Nanoratra omaly izahay momba ny vokatra Aqara vaovao, anisan'izany ny vaovao ...
Ny lakile hendry August vaovao dia efa amidy izao
Aogositra, hidy maranitra
Taorian'ny fanemorana ny saina, dia namoaka ny lakilem-paikany vaovao vaovao i August. Azontsika amin'ny loko roa izany - volafotsy sy matotra. Ny vidin'ny zipper dia 249 USD, ary ao amin'ny seta miaraka amin'i August Keypad - ...